ThuThu – ThuThuLay
တရုတ်သည် ဆယ်နှစ်အတွင်း နူကလီးယားလက်နက် ၂ ဆ ပိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ပင်တဂွန်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းမှာ မှားယွင်းသောထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရက ရှုတ်ချ လိုက်သည်။ ပင်တဂွန်က တရုတ်စစ်ရေးအကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပြီး ယခုနှစ်အတွက်လည်း သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က …
Hypersonic ခဲယမ်းစနစ်များကို တင့်ကားဖြင့်ပစ်ချရန် အမေရိကန်ဆောင်ရွက်နေ ( တရုတ်နဲ့ ရှရုားတွေ Hypersonic ခရုဇ်ဒုံးကျည်ဆိုပြီး လေကျယ်နေလို့ ခပ်ပါးပါးလေး ပြန်ပုတ်ပြလိုက်တာလား အမေရိကန် ) အမေရိကန်လေတပ်အနေဖြင့် Hypervelocity Guided Projectile စနစ်ကို အသုံးပြုလျက် …
မွေးရပ်မြေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ထူးခြားတဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ် ကွန့်မြူးမှုတွေနဲ့အတူ ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ဝတ် ရတနာတွေကို ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး Mondselle …
ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေရွှိုင်ဂူကိုယ်တိုင် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Sputnik V ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံထားခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကရုရှားသံရုံးရဲ့တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်မှာ ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေရွှိုင်ဂူက သောကြာနေ့မှာပဲ ကိုဗဈ-၁၉ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွ ပို့စ်တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အရာရှိတွေအားလုံးက စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို အဦးဆုံးထိုးနှံသွားကြမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားစစ်တပ်အကုန်လုံးကို ဖြန့်ကြက်ထိုးနှံသွားကြမှာပါလို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက …
– နယ်စပ်မှာ တရုတ်စစ်တပ်က အိန္ဒိယအရပ်သား ငါးဦးကို ဖမ်းသွားတယ်လို့ အိန္ဒိယ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးက ဆိုထားပါတယ်။ – အာရူနာချယ် ပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ်က စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှာ သူ့ တွစ်တာမှာ တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
ကျည်ဆံ တချက်မှ မဖောက်လိုက်ရဘဲ တရုတ်ကို နောက်ဆုတ်သွားအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ပွဲ (ပါးနပ်လွန်းတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ကမ္ဘာပါတ်ခရီးစဉ် ကြောင့် သွေးပျက်နေရတဲ့ တရုတ်ကြီး..)
(ရှီ ဘာလို့စိုးရိမ်နေတာလဲ? စိတ်ဝင်စားစရာပါ..) ၂၀၂၀ သြဂုတ်လထဲ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ပါ. စုစုပေါင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်း ၄ နိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေး ဘာရိန်း ယူအေအီးနဲ့ အိုမန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်တယ်. သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်ကစပါတယ်.. အာဖရိက ဆူဒန်လည်း …
ဂျပန်နယ်နိမိတ်အနီးမှာ တရုတ်ရေတပ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ဆက်တိုက်လုပ်မည်
နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနှင့်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများပိုမိုပြုလုပ်မည်ဟု တရုတ်အစိုးရက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများနောက်ခံရှိနေသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တွင် နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ ကွင်ဟွမ်ဒေါင်ဆိပ်ကမ်းအလွန်မှ ဘိုဟိုင်ပင်လယ်တွင် ပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်မည်ဟု ရေကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်များကပြောပါတယ်။ ဒုတိယလေ့ကျင့်မှုများတွင် သဏ္ဍာန်လုပ်ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများပါဝင်ပြီး ပင်လယ်ဝါတောင်ပိုင်းတွင် အင်္ဂါနေ့နှင့် …
Page 1 Page2… Page 653